Jilayaasha Bollywoodka Ee Guursadeen Shaqsiyaad Taagero U Ahaan Jireen Qeybti 2aad – Filimside
Jilayaasha Bollywoodka Ee Guursadeen Shaqsiyaad Taagero U Ahaan Jireen Qeybti 2aad
Jilayaasha Bollywoodka dhexdoodana wey is guursadeen sido kalena banaanakana wey ka guursadeen balse jilayaahsa guursadeen shaqsiyaadka banaanka ah ama aan Bollywoodk ku jirin waxay u qeybsamaan laba qeybood.
Qeybta kowaad iney guursadeen oo ay nolosha la wadaaagen shaqsiyaad iska caadi ah ay dooqa iyo jacel isku raaacen iyo iney guursadeen shaqsiyaad taagero waali ah u ahaan jireen waligood.
Waxaana idiin heynaa qaar kamid ah jilayaasha Bollywoodkaa ee guursadeen shaqsiyaad taagero u ahaan jireeen tusaale ahaan Dilip Kumar waxuu guursaaday Saira Banu oo ah atirisho caana ah oo bari samaadkii filmada wax kaa jishay balse kahor inta aysan shirkada Bollywoodka soo galin waxay taaagero u ahaan jirtay waliged Super Star Dilip Kumar oo ay daawan jirtay yaraanteda calafka ayaana markii dambe isku keenay heer ninkii ay taagered ay guursatay.
Hadaba Halkaan Hoose Kaga Bogo jilayaahsa Guursadeen Shaqsiyaad Taagero U Ahaan Jireenm Qeybti 2aad:
Sriram Madhav Nene: waxuu taagero u ahaan jiray Madhuri Dixit kahor inta uusan guursanin atirishadan:
Anil Thadani: waxu taagero u ahaan jiray Raveena Tandon kahor inta uusan guursanin
Jay Mehta: waxuu taagero u ahaan jiray Juhi Chawla kahor inta uusan guursanin..
Avantika Malik: waxay taagero weyn u ahed Imran Khan kahor inta aysan guursanin oo ay xaaskisa noqonin.
Farhan Azmi: waxuu taagero u ahaa Ayesha Takia kahor inta uusan guursanin gabadhaan.
weli waxaa dalka india ka taagan murankii u dhaliyay aktarka Vivek Oberoi kaaso hadal heyn weyn ka dhex abuuray baraha bulshada 20-kii saac u dambeysay kadib markuu soo dhigay baraha sawir Aishwarya nolosheeda uu ku falanqeynaayo iyo 3-dii nin ay xiriirka lasoo sameeysya kuwaaso Bollywoodka kawada tirsan.
Hadaba Dad badan ayaa ku kaceen Vivek Oberoi oo dumar badan ayaa ka dalbadeen inu sharaxaad dheeri ah ka bixiyo waxa micno ahaan uu ula jeedo sawirkaan maadama aflagaado ku tahay dumarka sawirkaan sida ay iyaga sheegen misane u fahmeen.
si kastaba arrintan waxaa markan ay gaartay maxkamada magaalada Mumbai ka dib markii ay aktarkan ay dacwad ka gudbiyeen gudiga ururka haweenka ee baarlamaanka dalka india kaaso lagu magacaabo All India Mahila Congress kuwaaso xigsanaya qodobka 509 ee dastuurka dalka india kaaso Vivek Oberoi inuu ka xudgudbay ama uu u gafay shaqsi dumar ah
waana mid caqabad ku noqon kartaa aktarkan kaaso dhawaan raali-gelin bixiyay laakiin waxaa weli daba-taagan mawduucan uu sheegay inuu markii hore uu arkay inay tahay kaftan laakiin uusan filaynaynin arrinka inhh heerkan gaaraayo
sidoo kale Vivek weli waa mid nasiib badan maadaama dhacdadaan weli aysan ka hadlin shaqsiyaadka uu ku aflagaaadeeyay sida Aishwarya Rai , Salman Khan Iyo Abishek Bachchan kuwaaso weli laga dhawr-sugaayo inay ka hadlaan mawduucan hadda gaaray meel kulul.
Daawo: Ghana geerida waa looga dabaal dagaa, Benin mataano dhaloow laguma gaaro iyo dhacdooyin kale!
iyadoo inyar ka hor aan idinla wadaagnay warbixin ku saabsan aktarka Vivek Oberoi kaaso maanta si weyn u qabsaday cinwaanada wargeysyada dalka india ka dib markii uu ku jee-jeesay xariirada jaceylkiisa hore atariishada lagu magacaabo Aishwarya Rai isagoo ku tusaale ahaan usoo qaatay inay tahay sida ay u dhacdo doorashada dalka india
Vivek ayaa hadda waxaa uu qaatay dhacdada ama muranka ugu weyn ee kaaso laga diiwan-geliyay doorashada guud dalka india sanadkan 2019 isagoo isku lifaaqay noloshii atariishada hore atariishada Aishwarya iyo doorashada dalka india
isagoo bartiisa Twitter uu soo dhigay sawir ka hadlaya xariirada ay soo sameesay jacaylkiisa hore atariishada Aishwarya kaaso ka hadlaya xariirada fashilmay sida Isaga iyo Salman Khan iyo guusha Abishek Bachchan kaaso markii dambe gacanta ku dhigay Aishwarya Rai
haddaba aktarkan waxaa si weyn usoo weerarayn dad aad u fara badan kuwaaso ku dhaleeceenaya inuu yahay shaqsi dabci xun kaaso magac ku raadinaya shaqsi marwo ah kaaso isaga hore xariir kala dhaxeeyaay waxaana ay leeyihiin waana wax si weyn loogu xumaado
waxaana dadkaas ka mid ah atariishada lagu magacaabo Sonam Kapoor taaso aktarkan ku tilmaamtay inuu yahay qof laga kiraah-yeesto
waxaana Sonam kapoor hadalo kulul oo ku aadan aktarkan soo dhigtay barteeda Twitter ka waxaana qoraalkeeda kusoo koobtay ” karaahiyo ah iyo caqli xumo”
Kaliya Sonam kapoor ma ahan shaqsiyaadka soo dhaleeceenaya Vivek Oberoi waxaa jira dad aad u fara badan kuwaaso aktarkan si weyn ugu aflagaadeeyeen baraha bulshada
“Ab koi rok nahi sakta” – Ye poster pe hi achchaa lagta hai!!
iyagoo sheegay inaysan weligood aysan daawan doonin filim uu isaga qayb ka yahay sidoo kalena looga baahan yahay inuu si dhakshi leh raali-gelin ku bixiyo
laakiin qoyska Bachchan weli ma jiro qof arrintan ka hadlaya waxaana dhawaan la sugi doona Abishek Bachchan sida uu arrintan uga hadlo ama inuusan ka hadlin